Namib သဲကန္တာရသို့သွားရောက် ခရီးသွားသတင်း
Mariela Carril | | နမီးဘီးယား, ကြည့်ဖို့ဘာလဲ
ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာဂြိုဟ်သည်လှပပြီးကွဲပြားခြားနားသောရှုခင်းများရှိသည်။ သန္တာကျောက်တန်းများ၊ အပူပိုင်းသစ်တောများ၊ အိပ်မက်များကမ်းခြေများ၊ မိုးကောင်းကင်များကိုဖြိုဖျက်သည့်တောင်တန်းများနှင့်မမေ့နိုင်သောသဲကန္တာရများရှိသည်။ ဤအသဲကန္တာရတစ်ခုမှာ Namib သဲကန္တာရအာဖရိကတိုက်တွင်အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်သည်။
1 Namib သဲကန္တာရ
2 Namib သဲကန္တာရသို့သွားပါ
ဒီအာဖရိကကအရေးအကြီးဆုံးလို့ပြောခဲ့တာပါ။ နမီးဘီးယားနှင့်တောင်အာဖရိကနယ်စပ်တွင်တည်ရှိသည်။ ၎င်းသည်အရှည်ကီလိုမီတာ ၂၀၀၀ ရှည်လျားပြီးအကျယ် ၈၀ မှ ၂၀၀ ကီလိုမီတာအကြားကွာခြားနိုင်သည်။ စတုရန်းကီလိုမီတာတွင်၎င်းမှာ ၈၁၀၀၀ ရှိပြီး၎င်း၏အမည်မှာအတိအကျဖြစ်သည် ကြီးမား.
တချို့ကဒီသဲကန္တာရစဉ်းစားပါ ကမ္ဘာပေါ်မှာအသက်အကြီးဆုံးဒါကြောင့်အနည်းဆုံးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း ၆၅ သန်းကအဲဒီမှာရှိတယ် တတိယခေတ်။ ငါတို့သူ့ကိုအဲဒီလိုပြောနိုင်တယ် ၎င်းကိုအဓိကရာသီဥတုဇုန်နှစ်ခုအဖြစ်ခွဲထားသည် Capricorn ၏အပူပိုင်းဒေသ၏တစ်ဖက်တစ်ချက်တွင်။ ရန် sur မိုးနည်းနည်းရှားပါးပြီးအပူချိန်နိမ့်ပြီးဆောင်းရာသီတွင်မူအေးခဲနိုင်သည် မွောကျ နွေရာသီတွင်များသောအားဖြင့်ပိုမိုရွာသွန်းသည်။
သဲကန္တာရ၏အစမှာ Great Escarpment ဟုခေါ်သည့်တောင်တန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ မြောက်ဘက်တွင်တောင်တန်းများသည်မြစ်များစွာကိုဖြတ်သန်းနေစဉ်တောင်ဘက်တွင်သဲများမှာများသောအားဖြင့်ထိုနေရာသည်ရှောင်ရှားရန်ခက်ခဲသောရှုခင်းကိုဖြစ်စေသည်။ ကမ်းရိုးတန်းတွင်ရေသည်အေး။ ငါးများပေါများသည်။
Namib သဲကန္တာရတွင်ဘဝသည်မည်သို့ရှိသနည်း။ ကောင်းပြီ၊ စိုထိုင်းဆ၊ ကမ်းရိုးတန်းတလျှောက်မြူများ၊ ချိုင့်ဝှမ်းများ၊ ချောက်ကြီးများနှင့်ကန်များကြောင့်အချို့သောအပင်များနှင့်တိရိစ္ဆာန်များသည်သဲကန္တာရအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသောဒေသများ၌မကြာခဏမတွေ့ရတော့ပေ။ ခြင်္သေ့များ၊ ခြင်္သေ့များ၊ သစ်ခုတ်များသို့မဟုတ်သစ်ကုလားအုတ်များကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
2013 ခုနှစ်ကတည်းကသဲကန္တာရ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်ဖြစ်သည်။ ကြေငြာထားသောisရိယာရှိပါသည် Namib အမျိုးသားဥယျာဉ်အရှည် ၃၂၀ ကီလိုမီတာနှင့်အကျယ် ၁၂၀ ကီလိုမီတာရှိသည်။ ၎င်းတွင်မီတာ ၃၀၀ အထိခုံများပါရှိသည်။ ပန်းခြံ၏အလယ်ဗဟိုတွင် Sossusvlei သည်ရေကန်များနှင့်မိုးရွာသည့်အခါထိုနေရာတွင်တည်ရှိသည်။ အချို့သည်ရာစုနှစ်များစွာအချည်းနှီးဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ခံအဖြူရောင်နှင့်အနီရောင်သဲများနှင့်ထူးဆန်းသောရှုခင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ သို့သော်မိုးရွာသည့်အခါရေဖြည့်သူများသည်ဘဝကိုဆွဲဆောင်ကြပြီးမြင်ကွင်းသည်အံ့သြစရာဖြစ်သည်။
သဲကန္တာရသည်လှပပြီးသင်ရာသီအလိုက်ရာသီဥတုကိုသွားလျှင်တောင်မှမည်သူ့ကိုမျှမပြေးဘဲနာရီပေါင်းများစွာကားမောင်းနိုင်သည်။ ဟုတ်တယ်၊ ဤအရပ်သို့လည်ပတ်ရန်အတွက်သင်ခရီးစဉ်တစ်ခုအတွက်စာရင်းသွင်းနိုင်သည် (သို့) အငှားကားဖြင့်ကိုယ်တိုင်သွားနိုင်သည် လေဆိပ်ကနေမိနစ် ၄၀ အကွာမှာရှိတဲ့ Namibia ရဲ့မြို့တော် Windhoek လေဆိပ်မှာသင်သွားယူနိုင်ပါတယ်။ ဤအရပ်မှပန်းခြံသို့ကျောက်စရစ်လမ်းကြောင်းများတစ်လျှောက်ငါးနာရီခန့်ကြာသောကြောင့်ထရပ်ကားတစ်စီးသို့မဟုတ် SUV ကားသည်အဆင်ပြေစေရန်အတွက်အဆင်ပြေပါသည်။
ထို့အပြင် GPS သည်အလုပ်မလုပ်နိုင်သကဲ့သို့ဒေသခံ SIM ကဒ်လည်းဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်မိုဘိုင်းပေါ်၌မြေပုံကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်အကြံပြုလိုသည် off line။ နမီးဘီးယား၏လမ်းများပေါ်တွင်ကားမောင်းခြင်းသည်လုံခြုံမှုရှိမရှိသင်တွေးမိပါသလား။ ဟုတ်ပါတယ်၊ တစ်ကိုယ်တော်မိန်းမတောင်မှခရီးထွက်ပြီးအကြံဥာဏ်ပေးခဲ့တယ်။ မည်သူမဆိုယောက်ျား၊ မိန်းမမျာရှိရမည် ကြိုတင်စီစဉ်ထားခရီးစဉ် ထို့ကြောင့်သဲကန္တာရသို့သွားသောလမ်းကြောင်းသည်အနည်းငယ်သာမူတည်လိမ့်မည် ဘယ်မှာနေမှာလဲ
Gondwana Lodges သည်များစွာသောအားဖြင့်အထူးအကြံပြုလိုပါသည်။ အထူးသဖြင့်သင်စခန်းချနေထိုင်ခြင်းကိုနှစ်သက်ခြင်းမရှိဘဲကြယ်အောက်ရှိဇိမ်ခံအတွေ့အကြုံကိုလိုချင်ပါက။ ကိုယ်ပိုင်အိမ်၊ ရေချိုးခန်းနှင့်ရေကူးကန်တို့ဖြင့်ဘန်ဂလိုများရှိပြီး ၁၀ ခန်းသာရှိသည်။ ထို့ကြောင့်သင်မြင်သောအရာကိုကြိုက်နှစ်သက်ပါက ... စာအုပ်! သင်ဤတွင်ကားဖြင့်သွားနိုင်သည်။ သင်ကသဲကန္တာရတွင်ရှိနေသောကြောင့်အလွန်ကောင်းသည့်နေရာဖြစ်သည်။ ထိုနေရာကိုရောက်ရန်အမျိုးသားဥယျာဉ်အတွင်းရှိ Sesriem ကိုသင်သွားရတော့မည်ဖြစ်သည်။
ဒါကြောင့်တစ်ချိန်ကသင်ကားတစ်စီးနှင့်အတူသင် Windhoek မှထွက်ခွာ။ တစ်နေ့လျှင်နာရီဝက်ခန့်ကားထဲတွင်နေရန်အဆင်သင့်ရှိသည်။ လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်တွင်နိမိတ်လက္ခဏာကိုသင်ဖြတ်သန်းသည် Capricorn ၏အပူပိုင်းဒေသ နှင့်ဓာတ်ပုံတစ် ဦး မဖြစ်မနေဖြစ်ပါတယ်။ ပထမနာရီသည်ပုံမှန်အားဖြင့် C26 ကဲ့သို့သောကတ္တရာလမ်းတစ်လျှောက်ဖြတ်သန်းသွားသော်လည်းနာရီအနည်းငယ်အကြာတွင် Solitaire ၏လမ်းကြောင်းပေါ်ရှိ D1275 ဘက်သို့လှည့်ပြီးကျောက်စိမ်းလမ်းများပေါ်တွင်ရှိပြီးအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောရှုခင်းများနှင့်ဝိုင်းရံထားသည်။
ထိုလမ်းကြောင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် Kupferberg Pass ကို Spreetschoogte Pass ကို ဖြတ်၍ Nauchas ကို ဖြတ်၍ လယ်ယာများနှင့်ရဲစခန်းများစွာကိုတွေ့လိမ့်မည်။ နောက်ဆုံးတော့ Solitaire ကိုရောက်တော့ Gondwana Lodges ကိုရောက်တဲ့အထိနောက်ထပ်မိနစ် ၄၀ ဆက်နေဖို့လိုသေးတယ်။ သင်ဒီမှာနေရန်ရွေးချယ်ပါကသဲကန္တာရ၏အတွင်းပိုင်းနှင့်အံ့ဖွယ်ရာများကိုသိရန်သင်၏စမှတ်ဖြစ်လျှင်မဟုတ်လျှင်သင်ရှာဖွေနိုင်သည် စခန်းများသို့မဟုတ်အခြားတည်းခိုခန်း We kebi Lodge၊ Le Mirage Hotel & Spa၊ Moon Montain Logde စသည်တို့ဖြစ်သည်။
ကောင်းပြီ, နောက်တစ်နေ့အရာသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ် Sossvlei နှင့် Deadvlei တို့၏areaရိယာ၊ နေထိုင်မှုနှင့်ရေကန်များနှင့် ပတ်သတ်၍ သိကျွမ်းပါကျနော်တို့ပြောနိုင်ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့သင် Sesriem ကိုသွားရမယ်။ ဆိုလိုတာက Gondwana Lodges မှနှစ်နာရီ၊ တစ်နာရီခွဲမောင်းရမည်။ အထက်တွင်ပြောခဲ့သည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့ Namib - Naukluft အမျိုးသားဥယျာဉ်အတွင်း၌ရှိနေသည် ဖြစ်၍ သင်ကားရပ်ပြီးဝင်ပေါက်ကိုပေးရမည်။ ထိုအခါကသို့ပြေးရန်လမ်းကြောင်းအတိုင်းလိုက်နာရန်နေဆဲဖြစ်သည် Dune 42 နှင့် Dune 45.
ဤနေရာတွင် Deadvlei နှင့် Sossusvlei သို့ကျွန်ုပ်တို့အားပို့ဆောင်မည့် jeep ၀ န်ဆောင်မှုအတွက်ဟုတ်ကဲ့ (သို့) ဟုတ်ကဲ့ပေးရပါမည်။ ဒီခရီးစဉ်တစ်ခုလုံးဘယ်အချိန်မှာစတင်သင့်သလဲ။ ကောင်းပြီဖြစ်စေအစောပိုင်းသို့မဟုတ်နောက်ကျဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ နေထွက်ခြင်းနှင့်နေဝင်ချိန်သည်သဲကန္တာရတွင်အကောင်းဆုံးသောအချိန်ဖြစ်သည်။ နံနက်ခင်းကိုရွေးချယ်လျှင်အကောင်းဆုံးအရောင်များကိုစဉ်းစားရန်နံနက် ၈ နာရီတွင် Dune 42 တွင်ရှိသင့်သည်။ Dune 8 နှင့် 42 နှစ်ခုလုံးသည်ကြီးမားပြီးကြီးမားသည် ကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးမားဆုံးခုံ.
သဲကန္တာရကိုတွေ့ပြီဆိုလျှင်သင် Jeep ယူရမည်။ သင့်မှာငှားရမ်းထားသော4x4 jeep ရှိပါသလား။ ကောင်းပြီ၊ သင်နှင့်သင့်သွားနိုင်သည်။ သို့သော်သဲထဲတွင်မမြဲစေရန်ကောင်းစွာမောင်းနှင်နည်းကိုသင်သိရမည်။ အဘယ်ကြောင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှု? ကျွန်တော်တို့ကကားမောင်းသူကိုပေးပြီးသူကကျွန်တော်တို့ကိုနေရာတိုင်းကိုခေါ်သွားပြီးကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အချိန်တိုင်းခေါ်သွားတယ်။ နောက်ဆုံးတော့, Namib သဲကန္တာရ၏ရေကန်များ။
A သေပြီ ၂၅ မိနစ်လောက်လမ်းလျှောက်ပြီးလမ်းလျှောက်လာခဲ့ကြတယ်။ ရေကန်တွေကလှတယ်လွန်ခဲ့သောအနှစ် ၇၀၀ ကသေဆုံးသွားသည်ဟုယုံကြည်ရသည့်သစ်ပင်ခြောက်အချို့နှင့်အတူအဖြူရောင်နောက်ခံရှိသည်။ မီတာ ၃၅၀ မြင့်သောခုံများ၊ ခုနစ်ရာစုပင်များဟုဆိုပါစို့။ အဲဒါကို Big Dune ဟုမခေါ်ခဲ့ပါ။ ထိုအခါအလှည့်ပါပဲ Sossusvlei ။
ဤ ဦး တည်ရာနှစ်ခုကိုလွဲချော်။ မရပါ၊ သို့သော်၎င်းတို့တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါ။ သငျသညျကိုတောင်နှင့်အတူလေထုကနေသဲကန္တာရကိုစောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ် လေယာဉ်ခရီးစဉ် လူတစ်ယောက်ကိုယူရို ၄၅၀ (သို့) ၄၀ အောက်လောက်ပဲပေးတယ်။ Skeleton Coast ဆီသို့လေယာဉ်ကသင့်ကိုနောက်ထပ်ထပ်မံပို့ဆောင်မယ်ဆိုရင်ဒီခရီးစဉ်ဟာ ၄၅ မိနစ်ဒါမှမဟုတ်တစ်နာရီခွဲကြာနိုင်ပါတယ်။
အနည်းငယ်အနည်းငယ် Namib သဲကန္တာရသို့သွားရန်အကြံပေးချက်များ: ဖိနပ်များသင့်ဖိနပ်အနိမ့်သို့ဝင်သောကြောင့်ဖိနပ်စီးပါ။ ရာသီဥတုကောင်းမွန်သောရာသီဥတုနှင့်အတူဇူလိုင်လဖြစ်သည်။ နံနက်ယံ၌သင်လည်ပတ်လျှင်နေဝင်ချိန်သို့ပြန်သွားသင့်သည်၊ အနည်းဆုံးသဲများနှင့်ဥယျာဉ်ဖွင့်ချိန်နာရီကိုကြည့်ရှုပါ ရေနှင့် ဦး ထုပ်တစ်ခုယူလာပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » အာဖရိကတိုက် » နမီးဘီးယား » Namib သဲကန္တာရသို့သွားပါ